Percival ny Fisainana sy faniriana Tokony hampitsahatra ny fikarohana karatra fikarohana mitady fanazavana marina momba ny fiainana. Ny mpanoratra dia mampiseho fa fantany ny momba azy. Tsy misy fiteny ara-pivavahana tsy misy dikany ary tsy misy dikany. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny portogey Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy Raha manontany tena ianao hoe iza ianao, nahoana ianao no eto, ny toetoetran'izao tontolo izao na ny dikan'ny fiainana dia tsy hamela anao hidina i Percival. Ny tena mahaliana dia ny fanazavany maro izay manazava ny lohahevitra mahagaga toy ny fahotana tany am-boalohany, ny fahatsiarovan-tena, ny fahalavoan'ny olombelona ary ny antony mahatonga ny lehilahy. Ny valinteniny amin'ireo fanontaniana ireo dia ny fahaiza-mandanjalanja, manam-pahaizana ary mahagaga. Ny lalana aleha ho an'ny olona misaina tsirairay dia mazava ho azy ary ny endrik'i The Great Way dia miavaka toy ny tsara indrindra nosoratana. Dingana miaraka amin'ny antsipiriany ary naseho mazava tsara, toy ny asa goavana rehetra atao Percival dia mampihena ny tombo-tsoan'ny toro lalana izay azon'ny olona tso-po takarina sy atao. Zavatra iray azo antoka: aorian'ny famakiana ny Thinking and Destiny ianao dia hametraka ny eritreritra izay hanosika anao hanatratra ny hoavinao. Miomàna!
Ny sakany sy ny halalin'ny Fisainana sy faniriana dia midadasika be, nefa mazava ho azy ny fiteniny, marina, ary mihevitra azy ho diso. Ny boky dia tanteraka tany am-piandohana, izay midika fa avy amin'ny fomba fisainan'i Percival no misy azy mazava tsara, ary noho izany dia ny lamba iray manontolo, tsy miova tanteraka. Tsy mihevitra ny heviny izy, tsy manombantombana na mihevi-tena. Tsy manao fanehoan-kevitra mampihetsi-po izy. Toa tsy misy idiran'ny teny, tsy misy teny diso na tsy misy dikany. Ny iray dia hahita fanohanana sy fanitarana ireo fitsipika sy fitsipika maro hafa izay voarakitra ao amin'ny Fampianaran'ny Fahendrena Tandrefana. Ny iray ihany koa mahita betsaka izay vaovao, na ny tantara aza dia hametrahana azy. Na izany aza, dia tokony ho hentitra loatra ny tsy hikorontana amin'ny fitsarana fa mitazona ny tenanao satria i Percival dia tsy sahiran-tsaina amin'ny fiarovany ny tenany amin'ny tsy mahazatra ny lohahevitra amin'ny lohahevitra rehefa mamela ny lojikan'ny famelabelarany izy handidy ny fotoana sy ny famitana ny fanambaràny. Ny fangatahan'i Heindel ao amin'ny "Word to the Wise" dia mety ihany koa amin'ny famakiana Percival: "Ampirisihina ny mpamaky mba tsy haneho ny fiderana na ny fanamelohana rehetra raha tsy efa mazoto mianatra momba ilay asa izy na tsia."
Fisainana sy faniriana amin'ny HW Percival dia iray amin'ireo boky miavaka indrindra hatramin'izay nosoratana. Mifamatotra amin'ny fanontaniana efa tranainy, Quo Vadis? Avy aiza isika? Nahoana isika no eto? Aiza no mandeha? Manazava ny fomba hahatonga ny eritreritsika ho tonga ho anjarantsika, toy ny asa, zavatra, ary zava-nitranga, eo amin'ny fiainantsika manokana. Ny tsirairay amintsika dia tompon'andraikitra amin'ireo eritreritra ireo, ary ny vokany eo amintsika sy ny hafa. Ny Percival dia mampiseho antsika fa ny zavatra tahaka ny hoe "korontana" eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia manana tanjona sy fandaminana izay azo jerena raha manomboka mifantoka amin'ny fisainantsika isika, ary manomboka ny Thinking Real, araka izay asongadina ao amin'ny sangan'asany. Miaiky ny Percival fa tsy mpitoriteny sady mpampianatra izy, fa manolotra kosmôlôgy mifototra amin'ny fahaiza-misaina. Andry iraisan'ny besinimaro sy ny tanjona. Tsy nisy boky metafizika nanolotra ny mazava sy mendrika izay misy ao amin'ity boky ity. Tena ara-tsindrimandry sy fitaomam-panahy!
Ny boky tsara indrindra novakiako; tena lalina ary manazava ny zava-drehetra momba ny fisian'ny olona iray. Nilaza i Buddha taloha ela izay fa ny eritreritra no renin'ny hetsika rehetra. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ity boky ity mba hanazavana amin'ny an-tsipiriany. Misaotra anao.